Waa Kuwan 14kii Ciyaartoy Ee Lagu Tilmaamay 'MESSI-ga Cusub' Laga Soo Bilaabo 2006 Ilaa 2019 - Gool24.Net
Waa Kuwan 14kii Ciyaartoy Ee Lagu Tilmaamay ‘MESSI-ga Cusub’ Laga Soo Bilaabo 2006 Ilaa 2019
Lionel Messi ayaa ahaa hal-beegga ciyaaryahannada da’da yar ee lagu qiyaaso mid kasta oo laga arko astaamo uu laacib wanaagsan ku noqon karayo, waxaana soo raacayay Cristiano Ronaldo oo sida xiddiga reer Argentine miiqiyaas looga dhigayay ciyaaryahannada da’da yar.
Laga soo bilaabo sannadkii 2006 waxa sannad kasta soo baxayay laacib da’yar oo lagu tilmaamayay inuu yahay ‘Messi-ga cusub’, kuwaas oo dhamaantood ku fashilmay inay qaadaan raadka laacibka hal-beegga looga dhigay.
Xiddiga Barcelona oo ay kubaddiisu tahay dabiici, waxa markii uu soo baxay ay dadku ku mataleen halyeygii reer Argentine ee Diego Maradona oo hal-beeg looga dhigay, waxaana uu si fiican u fuliyey wax kasta oo laga filayay isaga oo lix jeer loo doortay xiddiga adduunka, koob kasta oo uu u tartamaynay ku guuleystay marka laga reebo xulka qarankiisa oo uu faro madhan ka taagan yahay.
10 horyaal oo LaLiga ah, afar Champions League, Copa del Rey iyo koobab kale oo maxalli iyo heer caalami ahba waxa uu Lionel Messi hantiyey 15-kii sannadood ee uu hoggaaminayay Barcelona, waxaana wali la rumaysan yahay inuu guulo badan oo kale gaadhsiin karayo kooxda inkasta oo ay da’diisu tahay 32 jir.
Laga soo bilaabo sannadkii 2006, Lionel Messi waxa tusaale iyo hal-beeg si joogto ah looga dhigay ciyaartooyo da’yaraa, waxaana ugu horreeyey Bojan Krkic oo isaga oo Barcelona jooga sannadkii 2006 lagu tilmaamay Messi-ga cusub. Xilligan oo uu Messi ahaa 17 jir, waxa laga garab ciyaarsiiyey Lionel Messi oo ahaa 19 jir iyo saddex bilood oo kaliya.
Da’yarkii Real Madrid ee Gerardo Bruno ayaa sannadkii 2007 noqday midka lagu tilmaamay Messi cusub, waxaana kusii xigay Mauro Zrate, Amir Sayoud illaa laga soo gaadhay Martin Odegaard, Lee Seung-Woo, Pietro Pellegri iyo Thiago Almada.
Halkan ka akhriso magacyada 14-ka ciyaartoy ee lagu tilmaamay ‘New Messi’, sannadihii, kooxihii ay joogeen iyo naadiga ay waqtigan u ciyaaraan:
2006: Bojan Krkic (Barcelona, haddana wuxuu joogaa Montreal Impact)
2007: Gerardo Bruna (Real Madrid, haddana Derry City)
2008: Mauro Zarate (Lazio haddana Boca Juniors)
2009: Amir Sayoud (Al Ahly, haddana wuxuu u ciyaaraa CR Belouizdad)
2010: Gai Assulin (Barcelona, waqtiganna wuxuu ka tirsan yahay Politehnica Iasi)
2011: Iker Muniain (Athletic Bilbao, wuxuu hadda joogaa Athletic Bilbao)
2012: Ryo Miyaichi (Arsenal, waqtiganna wuxuu ka tirsan yahay St. Pauli)
2013: Ryan Gauld (Dundee United, haddana wuxuu u ciyaaraa Farense)
2014: Alen Halilovic (Dinamo Zagreb, haddana wuxuu u ciyaaraa Heerenveen oo amaah kaga qaadatay AC Milan)
2015: Martin Odegaard (Real Madrid, wuxuu joogaa Real Sociedad oo amaah kaga qaadatay Real Madrid)
2016: Lee Seung-Woo (Barcelona, wuxuu hadda joogaa Sint-Truiden)
2017: Pietro Pellegri (Genoa, wuxuu waqtigan u ciyaaraa Monaco)
2019: Thiago Almada (Laacibkan sannadkan lagu tilmaamay New Messi, waxa uu joogaa kooxda Velez Sarsfield)